प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रप्रतिलाई सोधे, राजीनामा दिउँ कि विश्वासको मत ? — newsparda.com
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रप्रतिलाई सोधे, राजीनामा दिउँ कि विश्वासको मत ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठक सकेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रप्रतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सोधे, राजीनामा दिउँ कि विश्वासको मत ? भनी सोधेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन् । वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी छ । https://janadeshkhabar.com/ बाट साभार गरीएको हो ।